Chii Chinonzi Kusununguka? 5 Hunhu hweVane Mahara-Mweya Mumwe Nomumwe - Blog
Chii chinonzi Yemweya Mahara: 5 Hunhu hunotsanangudza Hunhu uhu
Kuve wakasununguka mweya chimwe chinhu chatakatarisira kune imwe nguva kana imwe. Kufora kunoridzwa nedhiramu rako pachako kunogona kutora nguva, asi zvakakodzera kuti usvike ipapo. Heano matanho mashanu ekuti urikugomera kune rako rwiyo ...
maitiro ekubata nevanhu vane jongwe
Kuzvimiririra chinhu icho vazhinji vedu chatinotora sechisina basa, pamwe nechimwe chinhu icho vazhinji vanoona chakaoma. Zvakaoma kurarama hupenyu hwako pasina kutora maonero evamwe vanhu uye manzwiro. Kunyange zvichikosha ivai netsitsi , chikamu chekuve wakasununguka mweya uri kuzviitira wega sarudzo uye kurarama hupenyu hwako marongero aunosarudza.
Vakasununguka-vane mweya vanhu vanowanzo taurwa sevanorarama kunze kwenzira dzenzanga uye vane mararamiro asina kujairika. Izvi hazvidi kuti zvive zvakadaro! Ehezve, kana izvi zviri izvo zvakakosha kwauri, saka chienda nazvo. Nekudaro, ndiri mweya wakasununguka, kwandiri, zvinoreva kuenda neyako kuyerera. Gadzira mararamiro ako uye ubudirire pazviri. Zvinogara zvakanaka kutarisa neshamwari uye nemhuri, asi iwe unofanirwa kurarama hupenyu hwako wega. Iva nepfungwa dzako wega uye uve nekutenda mune zvaunogona.
Kuita sarudzo dzako, kuzviziva, uye kugona kuzvifungira zvese zviratidzo zvekuti uri mweya wakasununguka. Iwe haufanire kupfeka mune hippy-flares uye maruva korona kuti ukwane mune iyi hunhu mhando! Kugara uchiita zvakazara zvehupenyu hwako uye nekushingaira kusarudza kuti zvinhu pan kunze kwakakosha sei kwauri, uye hapana chinonyadzisa mune izvo.
Kuita zvinhu nemaonero ako uye nezvako kuti ubatsirwe chinhu chekushandira, usanyara . Semukadzi, ndainzwa kuti ndaifanira kuviga zvido zvangu. Ndinofungidzira ndakanga ndisingadi kuonekwa se'benzi 'nekuve nezvimwe zvishuwo zvisingaenderane. Kuva wakasununguka mweya zvinoreva kukumbundira zvaunoda kuita uye kuzviita, zvisinei nemafungiro evamwe vanhu.
2. Unofamba Paunenge Uchida
Kufamba ndechimwe chezvinhu izvo zvakaringana munhu wese wandinoziva kuti anganyora pasi pechikamu che'kuzvivaraidza nezvido 'zveCV yavo. Uye zvakadaro, vangani vedu vechokwadi vanofamba? Ndakave nerombo rakanaka, kana kungoshanda nesimba zvakakwana uye ndikatora kusvetuka kwekutenda, kufamba, uye ndakada sekondi yega yega. Kwandiri, kufamba chinhu chakakosha, uye ndechimwe chinhu chandinoisa pakutanga pandakafunga kusiya imba yangu kuEngland.
Mumaziso angu, kuve wakasununguka mweya zvinoreva izvo chete - mweya wako, pfungwa, uye muviri zvakasununguka kutenderera chero kwavanoda. Ehezve, ini ndinoziva kuti ndakakomborerwa sei kusiya hupenyu hwangu kumashure - ini ndakanga ndisina munhu aivimba chaizvo pandiri uye aive asina basa kune chero munhu. Ndakanga ndine zvisungo here? Eheka! Asi, kwandiri, kufamba kwaikosha zvekuti ndaive ndakazvipira kucheka zvisungo izvi ndichitsvaga rufaro rwangu.
Mamwe mazuva, ndinosuwa basa rangu uye furati rangu hombe uye murume anoshamisa wandanga ndichifambidzana naye, asi handizvidembi nesarudzo yangu yekusiya zvese kumashure. Kana kufamba kuchikosha kwauri, iwe unofanirwa kutsvaga nzira yekuita kuti zviitike.
Kana izvi zvisiri kusangana newe uye usina kana chekufarira, chinjana nechimwe chinhu icho zvinoita zvine basa newe. Pamwe iwe unoda kuenda kumitambo yemitambo, kana kuva nechido chechokwadi chekukwira makomo. Ukaona vamwe vanhu vachiedza kukutadzisa kuita zvinhu zvaunofarira, pane dambudziko ipapo. Midzimu yakasununguka inoziva nguva yekuzvida uye kuzviisa pakutanga - kana paine chimwe chinhu chakakosha kwauri, chiitevere.
Zvinogona kutora makore kuti uwane icho 'chinhu' icho chinonyatsopa mweya wako, saka kana iwe ita uzviwane, haufanire kunge uchiganhurira kunakirwa kwako uye kunakirwa nako kune mumwe munhu. Ndinowanzozviwana ndichinyora 'kusvika 5 mangwanani, ndichironga nzira dzekupedzisira-miniti, uye ndichishingairira kutsvaga zvinhu zvinondipa kumhanya kunovhundutsa kwekutya uye mufaro. Chero chingangopinda mumusoro mako paunenge uchiverenga ndizvo chaizvo izvo zvaunoda kuti uve uchiita zvimwe.
kubatsira sei munhu anoenda kuburikidza nekurambana
3. Une Zvako Zvaunofarira uye Zvaunofarira
Ini ndinoda kunzwa nezvezvinodiwa nevamwe vanhu, kunyangwe iri yangu yekufungidzira kwaMai nehuku dzake (iye akavavakira danho nyowani?) Kana mukomana wandiri kuona kuda kwekubika. Kunyanya kana achindigadzirira chikafu chinonaka! Ini ndichafara kupedza nguva nevandinoda ndichiita zvinhu zvinovafadza. Sezvandataura, tsitsi dzakakosha. Chinhu chingangodaro chisiri kufarira iwe , asi kana uchifarira mumwe munhu waunoda, iwe unofanirwa kuramba uchiedza kuti ubatanidzwe nayo.
Pane chinoitika mufirimu reThe Break Up apo mukadzi akaroorwa ari kutsanangura kuti sei akatsamwa zvekuti murume wake haadi kuenda kubharlet naye. Iye haasi kumukumbira kuti ajoine naye nekuti anoifarira, asi nekuti iye anochida, uye ichocho chega chinofanira kuve chikonzero chakaringana kuti aende naye. 'Hazvireve kuti iwe unoda ballet ... ndeye munhu waunoda (anoda) ballet uye iwe unoda (ing) kupedza nguva nemunhu iyeye.'
Iva nehanya nezvevamwe vanhu zvekuzvivaraidza uye utore mazviri. Uye tarisira chairo chinhu chimwe chete mukudzoka. Iwe unofanirwa kunzwa wakasununguka kuongorora uye kunakidzwa nezvose zvaunofarira iwe, uye iwe uri kupfuura kodzero yekutarisira rutsigiro kubva kune vanokuda. Chokwadi, zvaunofarira ndezvako pachako, asi zvinogara zvakanaka kuti ugone kuzvigovana neavo vakakukomberedza, kunyangwe kana vasina shungu nezvavo sezvauri.
Tsvaga zvinokufadza uye utevere icho, chero chiri. Ita kupenga nezvekugadzira tii strainers uye mashizha akasununguka uye kunwa tii yakawanda sezvaungagone. Enda kuraibhurari uye ubudise kadhi rako rehunhengo nemabhuku paHondo Yenyika II uye uverenge zvinonzwika pamubhedha. Kutanga kumuka kare uye kujoina yemuno yoga kirasi, kana kutenga bonde uye kudzidzira kumba mune yako yemukati. Chero chii chinokupa iyo buzz uye chinoita kuti iwe ude zvimwe ndizvo zvaunoda kuti uzadze mweya wako nazvo.
Kuva wakasununguka mweya zvinoreva kuti iwe une zvako zvaunofarira uye yako nyika yako kunakirwa. Kuita zvinhu nekuti zvinokuita kuti ufare, kunyangwe zvisinganzwisisike kana kusanzwisisika vangaratidzika sevamwe, kwakakosha. Chero vanhu ngavabatanidze kuda kwako kwemufaro sezvataurwa pamusoro, kana gamuchira iyo mutongo uye uzviite zvakadaro. Izvi zvinobatana nekuzvimiririra - ita izvo zvaunofarira kuita uye usarega chero munhu achiita kuti unzwe kusagadzikana nezvazvo. Kunze kwekuti zviri pamutemo, hongu.
5 Mabasa Akasununguka Midzimu Achabudirira Mune
Midzimu Yemahara Inotarisana Aya Matambudziko gumi Nomwe Muhupenyu Hwavo
5 Hunhu Hunhu Hunhu Hunokwezva Mufaro Uye Hutano Hukama
Maitiro Etsika Yemweya Yekare Inoita Kuti Ive Yakasarudzika Uye Yakanaka
4. Unonakidzwa Nekambani Yako Pachezvako
Kuve ndega chinhu chandaimbovenga. Handina kumbobvira ndanakirwa ndega-nguva nemifungo yangu, uye ini ndaizogara ndichitsvaga zvikonzero zvekuzvidzivirira. Zvangu, oga yaive nedudziro yakafanana neiyo kusurukirwa .
Kurumidza kumberi makore mashoma, uye ndinogara ndega. Ini ndichine hupenyu hwakazara-hunoshanda hwemagariro, hushamwari denderedzwa, uye hukama hwakanaka (zvakanaka, hutano!), Asi ini pakupedzisira ndakadzidza kuda kambani yangu yega. Pfungwa dzangu pachangu hadzichisiri chinhu chekutya nacho chinhu chandinokoshesa uye chandakashanda nesimba kuti ndigadzirise. Kugadzirisa pfungwa dzako nemuviri chinhu chinonyanya kukosha kwauri semweya wakasununguka.
kumisa shamwari nezvakanaka
Kuita zvinhu zvinokufadza, kugutsikana nekuva wega , uye kushingairira kuda nguva yako wega zvine hutano uye zvinoita kwete zvinokuita kuti usashamwaridzane. Kana zvikaita senge uri kuzviparadzanisa nevamwe vanhu, zvisinei, ungangoda kuzvitarisa wega uye uone kana paine chikonzero shure kwazvo. Pane zvese, kugona kushanda semunhu wega chiratidzo chekuti uri mweya wakasununguka.
Hapana munhu anofanirwa kukuita kuti unzwe sekunge iwe unofanirwa kuzvipira nekuda kwavo, saka ita shuwa kuti unozvikomberedza neshamwari, mhuri, uye vanobatsirana vanokutsigira. Kuva wakasununguka mweya hazvireve kusiya munhu wese zvinoreva uchitora sarudzo dzako uye kumbundira avo vanozvigamuchira izvo kana kufambira mberi kuzvinhu (nevanhu) zvinokushandira zvirinani.
Vanhu kazhinji vanobatanidza mweya yemahara nevakakwirira, vanhu vanobhururuka vasingakwanise kuzvipira kune chero chinhu kana chero munhu. Izvi hazvisi nguva dzose. Ichokwadi kuti vazhinji vedu tinozviona zvakaoma kugadzirisa, sezvo isu tichigara tichishuvira kunakidzwa uye kufara. Izvo zvakati, zvakanakisa adventures zvinowanzouya zvechimwe chinhu chinozivikanwa. Iwe haufanire kunge uri munyika nyowani mazuva ese, uchichinja zvisingaperi pakati pe temp temp uye studio studio kuti uve mweya wakasununguka. Iko kufunga kuseri kwezvaunoita kunotaura zvakanyanya, kana zvisiri, sekufamba kwako kwemuviri.
Chinhu chakakosha kutsvaga izvo zvinonzwa kuti zvakanaka iwe - izvo zvinogona kunge zviri kuita kuhukama, asi zvakaenzana zvinogona kureva kuongorora hutano hwako nehuwandu hwevakabatana. Iwe unogona kusarudza kugara padyo nemhuri uye shamwari, kana iwe ungangoda kutambanudza mapapiro ako. Chero nzira, pfungwa dzako dzinenge dzichitsvaga kutsvaga mafaro nyowani, kunyangwe mamiriro ako akagara akanyatso kufanana.
Rudzi urwu runobatanidza zvese zvepamusoro zvirevo pamwechete. Kuda iwe zvinoreva kuve wakasununguka paganda rako chairo, kutsvaga zvinhu zvinokuita kuti ufare, uye kurega izvo zvisingachakushandire. Chikamu chekuve wakasununguka mweya zvinoreva kutora mutoro wezviito zvako uye kuzvisunungura kubva kune chero chinhu chiri kukutadzisa. Mhuri uye shamwari dzinogona kunge dziri pasi, asi iwe haufanire kumbodaro unzwe kubatwa .
Kuva wakasununguka mweya kunogona kunge kuri kwekudzungaira kubva pamukana kuenda pamukana kana kungonakidzwa kwenguva uye kuregedza . Kusave nekutya uye kuyedza miganho yenzvimbo yako yekunyaradza chiratidzo chakasimba kwazvo chekuti wakasununguka-wakasununguka. Izvo zvese ndezve kuzvipokana iwe uye kushandisa zvakanyanya ese mamiriro ezvinhu anogona kukubatsira iwe. Kuzvida zvinoreva kutarisira zvaunoda iwe pachako, uye kugutsa pfungwa nemuviri wako nepose paunogona.
Pakupedzisira, kuzviitira zvinhu uye nekugadzira hupenyu hwaunoda chiratidzo chekunyatso kuva mweya wakasununguka. Zvinogona kutora chinguva kuti usvike, asi zvichave zvakakodzera rwendo, vimba neni…
kusaina mukomana wako haachakudi
Mr chikara anoita marii
ndinoda mukomana uyu zvakanyanya
chii chinonzi kurarama
sei uchida mukomana